Ogaden News Agency (ONA) – Nin somaliyeed oo lagu dilay Xerada qaxootiga ee Dhagaxley
Nin somaliyeed oo lagu dilay Xerada qaxootiga ee Dhagaxley
Posted by ONA Admin	/ June 23, 2012
Budhcad hubeysan ayaa maanta ku dishay nin kamid ah qaxootiga Somaliyeed xerada Dhaqagaxlay, faah faahinta warkan ayaa wali nasoo gaadhin, waxaana kalasocotaan waxii kasoo kordha warkaas.
Xeryaha qaxootiga ayaa ah goob dilal badan ay ka dhacaan kuwaas oo qaarkood lagu eedeyo inay kooxaha ka dagalama somaliya ee Alshabaab ay geystaan. Waxaana dhowaan xerada Qaxootiga Ifo lagu qarxiyay gaadhi ay saarneyd haweenay somali ah oo aheyd gudomiyaha qaxootiga ee xeradaas.
Xeryaha qaxootiga Kenya oo horey hoy ugu ahaan jiray qaxootiga Somalida Jamuhiiryadi Somaliya kadib dagaalki Sokeeya lagasoo bilaabo sanadihii 1991 illaa hada ayaa waxa kusoo biiray qaxootigaas somaliyeed dad kasoo qaxay dhulka Somalida Ogadeniya.
Taniyo mudadii ay shabaab qabsatay dhulbadan oo kamid ah Somaliya islamarkaasna ay daggaalo ku dhexmareen ciidamada Kenya iyo Ethiopia waxaa ka bilowday dilal loo aneynayo arrimo siyasadeed xeryaha Qaxootiga ee Kenya.
Waxaa kale oo sidoo kale Ciidamada gumeysiga Ethiopia ay dilal ka geystaan xeryaha qaxootiga kuwaas oo ay la beegsadaan shacabka Somalida Ogadeniya ee kasoo qaxay Ogadeniya.
Balse dilka maanta kasoo kordhay xeryaha qaxootiga ee lagu dilay ninkan somaliyeed ayaasan wax faahfaahin ah nasoo gaadhin wali. waxii war ah ee ka helno dib kala socda.